Fihetsika Kristiana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny fihetsika kristianina
Ny fitondrantena kristiana dia mifototra amin’ny fahatokiana sy ny tsy fivadihana feno fitiavana amin’ny Mpamonjy, izay tia antsika ka nanolotra ny tenany ho antsika. Ny fahatokiana an’i Jesoa Kristy dia aseho amin’ny finoana ny filazantsara sy amin’ny asam-pitiavana. Amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no hanovan’i Kristy ny fon’ny mpino azy ka hahatonga azy ireo hamoa: fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahatokiana, faharetana, fahamoram-panahy, fahalemem-panahy, fifehezan-tena, fahamarinana ary fahamarinana. (1. Johannes 3,23- enina ambin'ny folo; 4,20- enina ambin'ny folo; 2. Korintiana 5,15; Galatianina 5,6.22-23; Efesianina 5,9)
Fitsipi-pitondran-tena ao amin'ny Kristianisma
Tsy eo ambanin’ny lalàn’i Mosesy ny Kristianina, ary tsy ho voavonjy amin’ny alalan’ny lalàna rehetra isika, anisan’izany ny didy ao amin’ny Testamenta Vaovao. Mbola manana fitsipika momba ny fitondran-tena anefa ny Kristianisma. Anisan’izany ny fiovana eo amin’ny fomba fiainantsika. Mitaky ny fiainantsika izany. Tokony ho velona ho an’i Kristy isika fa tsy ho an’ny tenantsika (2. Korintiana 5,15). Andriamanitra no Andriamanitsika, laharam-pahamehana amin’ny zava-drehetra, ary manana zavatra holazaina momba ny fomba fiainantsika Izy.
Ny iray amin’ireo zavatra farany nangatahan’i Jesosy tamin’ny mpianany dia ny hampianatra ny olona “hitandrina izay rehetra andidiako anareo.” ( Matio 2 Kor.8,20). Nanome didy i Jesosy, ary amin’ny maha-mpianany antsika dia tsy maintsy mitory didy sy fankatoavana koa isika. Mitory sy mankatò ireo didy ireo isika, tsy ho fomban’ny famonjena, tsy ho fomba fanamelohana, fa ho toromarika avy amin’ny Zanak’Andriamanitra. Tokony hankatò ny teniny ny olona, ​​tsy noho ny tahotra sazy, fa noho ny tenin’ny Mpamonjy azy fotsiny.
Ny fankatoavana tanteraka dia tsy ny tanjon'ny fiainana kristiana; ny tanjon'ny fiainana kristiana dia ny fananana an'Andriamanitra. An'Andriamanitra isika, rehefa mitoetra ao amintsika i Kristy, ary Kristy ao amintsika rehefa mametraka ny fitokisantsika aminy. Kristy ao amintsika no mitondra antsika mankato amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina.
Manova antsika ho endrik'i Kristy Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavany dia mitombo toa an'i Kristy isika. Ny didiny dia tsy ny fihetsika ivelany ihany, fa ny eritreritra sy ny antony manosika ny fontsika koa. Ireo eritreritra sy hery manosika ny fontsika ireo dia mitaky ny herin'ny fiovan'ny Fanahy Masina; tsy azontsika atao ny manova azy ireo fotsiny amin'ny herintsika. Ny ampahany amin'ny finoana àry dia ny matoky an'Andriamanitra hanao ny asany amin'ny fanovana antsika.
Ny didy lehibe indrindra - ny fitiavana an'Andriamanitra - no antony lehibe indrindra manosika ny fankatoavana. Mankatò azy isika satria tia azy ary tia azy, satria fahasoavana no nampidirany antsika ho ao an-tranony. Andriamanitra no miasa ao anatintsika mba hahatanteraka ny sitrapony sy ny fanatanterahana araka ny sitrapony (Filipiana 2,13).
Inona no ataontsika raha tsy tratrarina ilay tanjona? Mazava ho azy fa manenina sy mangataka famelan-keloka izahay, ary matoky tanteraka fa misy izany ho antsika. Tsy te handray mora an'io izahay fa tokony hampiasa izany foana.
Inona no ataontsika rehefa tsy mahomby ny hafa? Manameloka sy manizingizina ve ianao fa manao asa tsara izy ireo mba hanaporofoana ny fahamarinany? Toa fironan’olombelona izany, fa izany indrindra no lazain’i Kristy fa tsy tokony hataontsika7,3).
Ny didin'ny Testamenta Vaovao
Manao ahoana ny fiainana Kristiana? Misy didy zato ao amin'ny Testamenta Vaovao. Tsy ampy ny toromarika momba ny fiasan'ny fiainana miorina amin'ny finoana ao amin'ny tena tontolo. Misy baiko ny fomba tokony hitondran'ny mpanankarena ny mahantra, baiko ny fomba tokony hitondran'ny mpivady ny vadiny, baiko ny fomba tokony hiarahantsika miasa toy ny fiangonana.
1. Thessalonians 5,21-22 dia misy lisitra tsotra:
Mihavàna tsara ...
Torio ilay mikorontana,
ampionony izay osa fo, ento ny malemy, mahareta amin'izay rehetra.
Zahao fa tsy misy mamaly ratsy ny hafa ...
manenjika foana ny tsara ...
Ho faly foana;
mivavaha tsy mitsahatra;
mankasitraka amin'ny zavatra rehetra ...
Tsy mampivadika ny saina;
ny teny faminaniana dia tsy manao tsinontsinona.
Hamarino ny zava-drehetra.
Tohizo ny tsara.
Halaviro ny toetra ratsy rehetra.
Fantatr'i Paoly fa ny kristiana tany Tesalonika dia manana ny Fanahy Masina afaka hitarika sy hampianatra azy ireo. Fantany koa fa mila fampitandremana sy fahatsiarovana sasantsasany mifandray amin'ny fiainana kristianina izy ireo. Ny Fanahy Masina dia nanapa-kevitra ny hampianatra sy hitarika azy ireo amin'ny alalàn'i Paoly. Tsy nandrahona ny handroaka azy ireo hiala ny fiangonana i Paoly raha tsy notanterahiny ireo fepetra takiana - nomeny azy fotsiny ireo didy izay nitarika azy ireo handeha amin'ny lalan'ny fahamarinana.
Fampitandremana amin'ny tsy fankatoavana
Nanana fitsipika ambony i Paoly. Na dia misy aza ny famelan-keloka, dia misy ny sazy ho an'ny ota eto amin'ity fiainana ity - ary izany indraindray dia misy sazy ara-tsosialy. «Aza manao na inona na inona amin’izay manao ny tenany ho rahalahy sady mpijangajanga na mpandainga, na mpanompo sampy, na mpiteny ratsy an’Andriamanitra, na mpimamo, na jiolahy; tsy tokony hiara-misakafo amin'olona toy izany ianao »(1. Korintiana 5,11).
Tsy tian’i Paoly ho fialofana ho an’ny mpanota miharihary sy miziriziry ny fiangonana. Ny fiangonana dia karazana hopitaly ho an'ny fanarenana, fa tsy "faritra azo antoka" ho an'ny parasy ara-tsosialy. Nanome toromarika ny Kristianina tany Korinto i Paoly mba hanafay ny olona iray izay nanao firaisana ara-nofo (1. Korintiana 5,5-8) ary namporisika azy koa izy hamela ny helony rehefa avy nibebaka (2. Korintiana 2,5- iray).
Ny Testamenta Vaovao dia manana zavatra betsaka holazaina momba ny fahotana, ary manome antsika didy maro. Andeha hojerentsika vetivety ny Galatianina. Ao amin’io fanehoana fanafahana kristiana amin’ny lalàna io, i Paoly dia manome antsika didy feno fahasahiana ihany koa. Tsy ambanin’ny lalàna ny Kristianina, nefa tsy mpandika lalàna koa. Mampitandrina izy hoe: "Aza mifora, fandrao ho lavo amin'ny fahasoavana ianao!" Tena didy lehibe izany (Galatianina 5,2-4). Aza andevozin'ny lalàna efa lany andro!
Nampitandrina ny Galatianina i Paoly amin'ny olona izay manandrana "misakana azy ireo tsy hanaiky ny fahamarinana" (and. 7). Nivadika hanohitra ny Judaizers i Paul. Nilaza izy ireo fa mankatò an'Andriamanitra, nefa nilaza i Paoly fa tsy nanaiky izy ireo. Tsy mankatoa an'Andriamanitra isika rehefa manandrana mibaiko zavatra efa lany andro.
Hafa kosa ny fihetsik’i Paoly ao amin’ny andininy faha-9: “Ny masirasira kely dia mahatonga ny koba manontolo ho masirasira”. Amin'ity tranga ity, ny masirasira ota dia fihetsika mifototra amin'ny lalàna manoloana ny fivavahana. Mety hiparitaka io fahadisoana io raha tsy torina ny fahamarinan’ny fahasoavana. Misy foana ny olona vonona ny hijery ny lalàna ho fandrefesana ny maha mpivavaka azy. Na dia ny fitsipika maneritery aza dia mahasarika an’ireo izay manao ny tsara. ( Kolosianina 2,23).
Antsoina ho amin’ny fahafahana ny kristiana – «Tandremo ihany fa amin’ny alalan’ny fahafahana no tsy manome toerana ny nofo; fa mifampanompoa amin’ny fitiavana » (Galatiana 5,13). Miaraka amin'ny fahalalahana dia misy adidy, raha tsy izany ny "fahalalahan'ny" olona iray dia manimba ny an'ny hafa. Tsy misy olona tokony hanana fahalalahana hitarika ny hafa ho amin’ny fanandevozana amin’ny alalan’ny fitoriana, na hahazoana mpanaraka ho an’ny tenany, na hanao zavatra ho an’ny vahoakan’Andriamanitra. Tsy azo atao ny mampisara-bazana sy tsy kristiana toy izany.
"Ny lalàna iray manontolo dia tanteraka amin'ny teny iray", hoy i Paoly ao amin'ny andininy 14: "Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao!" Izany dia mamintina ny adidintsika tsirairay avy. Ny fomba mifanohitra amin'ny ady amin'ny tombontsoan'ny tena dia manimba tena (and. 15)
"Miaina amin'ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo" (and. 16). Ny fanahy dia hitarika antsika ho amin'ny fitiavana fa tsy amin'ny fitiavan-tena. Ny eritreritra feno fitiavan-tena dia avy amin'ny nofo, fa ny Fanahin'Andriamanitra dia mamorona eritreritra tsara kokoa. «Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo; mifanohitra izy ireo ... »(and. 17). Noho io fifanolanana misy eo amin'ny Fanahy sy ny nofo io dia manota isika indraindray rehefa tsy tiantsika.
Ka inona ary ny vahaolana amin'ny fahotana izay misy fiantraikany mora amintsika? Ento miverina ny lalàna? Tsia!
"Fa raha ny Fanahy no manapaka anao, dia tsy mba ambanin'ny lalàna ianao" (and. 18). Tsy mitovy ny fomba fiainantsika. Mijery ny Fanahy isika ary ny Fanahy dia hampivelatra ao amintsika ny faniriana sy tanjaka hiaina mifanaraka amin'ny didin'i Kristy. Ampiarahanay amin'ny soavaly ny soavaly.
Mijery an'i Jesosy aloha isika ary mahita ny didiny ao anatin'ny tontolon'ny tsy fivadihantsika manokana azy, fa tsy ny fitsipika "tsy maintsy arahana, raha tsy izany dia hosaziana isika".
Ao amin'ny Galatianina 5 dia tanisain'i Paoly ny fahotana isan-karazany: “Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana; Fanompoan-tsampy sy fanaovana ody ratsy; Fankahalana, fifandirana, fialonana, fahatezerana, fifandirana, fifanolanana, fisaraham-bazana ary fialonana; Misotro, misakafo ary ny toy izany ”(and 19-21). Ny sasany amin'ireny dia fihetsika, ny sasany dia toetra, fa samy tia tena ary avy amin'ny fo mpanota.
Mampitandrina antsika mafy i Paoly: "... izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra" (and 21). Tsy fomban'Andriamanitra izany; tsy izany no tiantsika hahatongavana; tsy izany no tadiavintsika ny fiangonana ...
Misy famelan-keloka ho an'ireo fahotana rehetra ireo (1. Korintiana 6,9-11). Midika ve izany fa tokony hanajamba ny ota ny Fiangonana? Tsia, tsy bodofotsy na fialofana ho an’ny fahotana toy izany ny fiangonana. Ny fiangonana dia natao ho toerana anehoana sy anomezana ny fahasoavana sy famelan-keloka fa tsy toerana avela hiparitaka tsy voafehy ny ota.
“Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, ​​fahamarinana, fahalemem-panahy, fahadiovam-pitondrantena” (Galatiana). 5,22-23). Izany no vokatry ny fo feno fanoloran-tena ho an’Andriamanitra. “Izay an’i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny filany sy ny filany tamin’ny hazo fijaliana” (and 24). Miaraka amin’ny Fanahy izay miasa ao anatintsika, dia mitombo ny sitrapo sy ny hery handà ny asan’ny nofo isika. Mitondra ny vokatry ny asan’Andriamanitra ao anatintsika isika.
Mazava ny hafatr'i Paoly: tsy ambanin'ny lalàna isika - fa kosa tsy mpandika lalàna. Eo ambanin'ny fahefan'i Kristy isika, eo ambanin'ny lalàny, eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina. Ny fiainantsika dia mifototra amin'ny finoana, atosiky ny fitiavana, miavaka amin'ny fifaliana, fiadanam-po ary fitomboana. "Raha velona amin'ny Fanahy isika, dia aoka handeha araka ny Fanahy" (and. 25).